Skype ကို | November 2019
Skype ကိုဖြစ်ပါသည်: တိတ်ရန်
စာသားမထက်အခြားမည်သည့် mode မှာ Skype ကိုအပေါ်ဆက်သွယ်ဖို့, သင်ပါဝင်သည်မိုက်ခရိုဖုန်းလိုအပ်ပါတယ်။ မိုက်ခရိုဖုန်းမပါဘဲဖုန်းခေါ်, ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်အခါ, သို့မဟုတ်မျိုးစုံသည်အသုံးပြုသူများအကြားညီလာခံကာလအတွင်းအသံဘာမှလုပ်ပေးလို့မရပါဘူး။ ကပယ်လျှင်, Skype ကိုအပေါ်မိုက်ခရိုဖုန်းကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ကြပါစို့။ သင်တစ်ဦး built-in မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်အတူတစ်ဦး Laptop ကိုအသုံးမပြုခဲ့လျှင် Skype ကိုဆော့ဖျဝဲထဲတွင်မိုက်ခရိုဖုန်းကိုဖွင့်ရန်, တစ်မိုက်ခရိုဖုန်းကိုချိတ်ဆက်နေသောကြောင့်, လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး, သင်, သင်တန်း, ကွန်ပျူတာကိုချိတ်ဆက်ဖို့လိုပါတယ်။
Skype ကိုအစီအစဉ်ကို: ဖောက်ထွင်း၏အမှု၌လုပ်ရပ်များ
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကို operating, မည်သည့်အစီအစဉ်ကိုအတူလုပ်ကိုင်သောအခါအဆုံးမနှစ်မြို့ဖွယ်ရှုထောင့်, တက hack ကဟက်ကာများသည်။ ထိခိုက်နစ်နာအသုံးပြုသူများသည်စသည်တို့ကိုသည်လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်ကိုမသာမဆုံးရှုံးပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်သင့်အကောင့်ကိုဝင်ရောက်, အဆက်အသွယ်စာရင်း, ဖိုင်အပြန်အလှန်စာပေးစာယူစေခြင်းငှါ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တိုက်ခိုက်သူတစ်ဦးကိုစပမ်ပေးပို့, ပိုက်ဆံချေးဖို့တောင်းဆိုနေတာ, ဘေးဒဏ်သင့်အသုံးပြုသူရဲ့မကျြနှာကိုမှအဆက်အသွယ်ဒေတာဘေ့စတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်သူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Skype ကိုအစီအစဉ်ကိုအင်တာနက်ပေါ်ရှိဆက်သွယ်ဖို့လူတွေလုပ်ပိုင်ခွင့်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, တကယ်စကားပြောလိုမထားတဲ့ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များ, နှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးအပြုအမူရှိပါတယ်, သင် Skype ကိုအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ဖယ်ချင်စေသည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒီလူတွေကိုသော့ခတ်မရနိုငျသလဲ? ရဲ့ Skype ကိုဆော့ဖ်ဝဲပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပိတ်ဆို့ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ရှုကြပါစို့။
Skype ကိုတစ်ညီလာခံ Creating
Skype ကိုအလုပ်လုပ် - ကဖွင့်မယ့်နှစ်လမ်းဆက်သွယ်ရေးမဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်လည်း Multi-user ညီလာခံ၏ဖန်ဆင်းခြင်း။ အဆိုပါအစီအစဉ်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုသငျသညျအများအပြားသည်အသုံးပြုသူများအကြားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ခေါ်ဆိုခစုစည်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ Skype ကိုအပေါ်တစ်ဦးညီလာခံဖန်တီးဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေကြပါစို့။ ဘယ်လို 8 မှာ Skype ကိုညီလာခံဖန်တီးနှင့်အထက်, ပထမ Skype ကို messenger ကိုဗားရှင်း 8 နှင့်အထက်အတွက်ကွန်ဖရအတွက်အဆိုပါ algorithm ကိုစစျဆေးဖို့။
Skype ကိုဆော့ဖ်ဝဲအဟောင်းများကိုမက်ဆေ့ခ်ျ View
Skype ကိုပေါ်စကားလက်ဆုံမှတ်မိခြင်းနှင့်အမြင်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေအမျိုးမျိုးသောခွအေနမြေားတော်တော်ကြီးမားတဲ့န့်အသတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းစွာမဟုတ်ဘဲအမြဲအဟောင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုပရိုဂရမ်ထဲမှာမြင်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ Skype ကိုအစီအစဉ်တွင်ဟောင်းများကိုမက်ဆေ့ခ်ျများကြည့်ရှုရန်မည်သို့မည်ပုံရှာဖွေကြပါစို့။ အဆိုပါမက်ဆေ့ခ်ျအဘယ်မှာရှိကြသနည်း ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏, ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများသိုလှောင်ထားရာက, သူတို့သညျ "get" ဖြစ်သင့်သည်အဘယ်မှာရှိဒါကြောင့်ကျနော်တို့နားလည်ဖြစ်ပါတယ်ထွက်ရှာကြကုန်အံ့။
Skype ကိုအတူချက်တင် Creating
Skype ကိုဖွင့်နှစ်ခုသည်အသုံးပြုသူများအကြားကဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးသို့မဟုတ်စာပေးစာယူဘို့, ဒါပေမယ့်လည်းအုပ်စုစာသားကိုဆက်သွယ်ရေးမဟုတ်ပါ။ အဖှဲ့အစညျး၏ဤအမျိုးအစားချက်တင်ဆက်သွယ်ရေးဟုခေါ်သည်။ ဒါဟာတစ်ချိန်တည်းမှာအများအပြားသည်အသုံးပြုသူများမှပြောပြရန်တိကျသောပြဿနာများဖြေရှင်းနည်း, ဒါမှမဟုတ်ပဲကောင်းတဲ့ဆွေးနွေးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆိုပါ Skype ကိုအစီအစဉ်ကိုအသံနှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုစေနိုင်သည်သာမက, ဒါမှမဟုတ်ကိုက်ညီဖို့, ဒါပေမယ့်လည်းဖိုင်များကိုဖလှယ်ပါစေ။ အထူးသဖြင့်, ဤအစီအစဉ်နှင့်အတူ, သင်ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်နှုတ်ခွန်းဆက်ကတ်များပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ရဲ့ကျွန်တော်တစ်ဦး Full-စုံတဲ့အဆိုပါ PC အတွက်အစီအစဉ်အဖြစ်က၎င်း၏မိုဘိုင်းဗားရှင်း၌ရှိသကဲ့သို့စေနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုကြည့်ကြရအောင်။
ကြိုဆိုပါတယ်! "ပေါင်မုန့်ကိုခန္ဓာကိုယ်, စိတ်ကိုအဟာရဖြည်နှင့်စာအုပ်အဟာရဖြည်" ... စာအုပ်များ - ခေတ်သစ်လူသား၏တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရင်းမြစ်များထဲကတစ်ခု။ စာအုပ်များ (တဦးတည်းစာအုပ်နွားတစ်ဦးနွားများအတွက်ဖလှယ်နိုင်ပါသည်!) ရှေးခေတ်ကာလ၌ထင်ရှားအလွန်စျေးကြီးခဲ့ကြသည်ပါပြီ။ ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ - ထိုစာအုပ်များလူတိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်များမှာ! သူတို့ကို Reading ကျနော်တို့နားလည်တဲ့ရူပါရုံကို, ဖွံ့ဖြိုးဆဲပိုစာတတ်မြောက်ဖြစ်လာသည်။
ဖြေရှင်းချက်: Skype ကိုအတွက် command ကို process မလုံလောကျမှတျဉာဏျ
အလုပ်အတွက်ပြဿနာများမဆိုကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ကနေရရှိနိုင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, Skype ကိုတစ်ခုချွင်းချက်မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကလျှောက်လွှာအလိုလိုအားနည်းချက်များနှင့်ပြင်ပလွတ်လပ်သောအချက်များအဖြစ်ကိုခေါ်နိုင်ပါသည်။ "အပြောင်းအလဲနဲ့အမိန့်တော်ရှိဖို့မလုံလောက်မှတ်ဉာဏ်" လို့အမှားအယွင်းများအတွက် Skype ကိုအစီအစဉ်တွင်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာရှာဖွေကြပါစို့ငါတို့သည်အဘယ်သို့ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။
Skype ကိုပြဿနာများ: 1603 အမှား install လုပ်သည့်အခါ applications များ
ကံမကောင်းစွာပဲတလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားအတွက်အမှားအယွင်းများအမျိုးမျိုးနီးပါးပရိုဂရမ်အားလုံးကို၏လုပျငနျးဖြင့်လိုက်ပါသွား။ ထို့အပြင်အချို့ကိစ္စများတွင်, သူတို့ကပင်လျှောက်လွှာ installation ကိုအဆင့်မှာပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ထို program ကိုတောင်မစတင်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ Skype ကို install လုပ်သည့်အခါ 1603 အမှားဖြစ်စေတဲ့အရာကိုရှာဖွေကြပါစို့, ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့နည်းလမ်းတွေဘာတွေလုပ်နေလဲ။
ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကိုရန်သင့်နားကြပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ကိုဘယ်လို
ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာအကြှနျုပျတို့အသေးစိတ်အတွက်ကွန်ပျူတာနှင့်လက်တော့မှ (မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်စပီကာများအပါအဝင်) နားကြပ်ကိုဆက်သွယ်ထားသော၏ဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်းစားပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်, ခပ်သိမ်းသောရိုးရှင်းပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သူကကွန်ပျူတာမှာအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုချဲ့ထွင်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးကသင်သည်အဘယ်သူကိုမျှမနှောက်ယှက်သီချင်းနားထောင်နှင့်မနိုင်, Skype ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းကစား။
Skype ကိုဖြစ်ပါသည်: ဘယ်လိုသင်သော့ခတ်ဖြစ်ကြောင်းသိလား
Skype ကို - ကအင်တာနက်မှတဆင့်ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်ခေတ်သစ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုပါပဲ။ ဒါဟာစကားသံကို, စာသားနှင့်ဗီဒီယိုမက်ဆေ့ခ်ျပို့ဖို့အခွင့်အလမ်းအဖြစ်အပိုဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏နံပါတ်ပေးသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်၏ tools များအနက်အဆက်အသွယ်စီမံခန့်ခွဲမှုများအတွက်ကျယ်ပြန့်အခွင့်အလမ်းကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်တစ်ဦး Skype ကိုပေါ်မဆိုအသုံးပြုသူပိတ်ဆို့နိုင်ပြီး, သူသည်ဤအစီအစဉ်ကိုတဆင့်ဆက်သွယ်ရန်မည်သည့်လမ်းအတွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်။
Skype ကိုပြဿနာများ: အလုပ်လုပ်ကိုင်အသံဖမ်း devices များ
Skype ကိုဆော့ဖျဝဲ၏အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုမှာအသံနှင့်ဗီဒီယိုဆွေးနွေးပွဲများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝကျကျ, ကိရိယာမှတ်တမ်းတင်အသံမပါဘဲထိုကဲ့သို့သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး, သည်, မိုက်ခရိုဖုန်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, တစ်ခါတစ်ရံအသံဖမ်းကိရိယာများကိုထောက်ပံ့သည်။ အဘယ်အရာကိုပြဿနာတွေအသံဖမ်းကိရိယာများ၏အပြန်အလှန်နဲ့ဆက်စပ်နှင့် Skype ကိုဆော့ဖ်ဝဲ, နှင့်မည်သို့သူတို့ကိုဖြေရှင်းနိုင်ကြသည်ထွက်ရှာတွေ့ကြပါစို့။
Skype ကို logged in ဝင်သောနေကြသည်ဘူးအဘယ်ကြောင့်
သငျသညျ Skype ကို login ဝင်ဖို့ကြိုးစားလျှင်သင်အောက်ပါအမှားနှငျ့ရငျဆိုငျနေကြသည်: "ဒေတာအမှားကြောင့် Logon ပျက်ကွက်" မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ကျနော်တို့အခု fix ဖို့ဘယ်လိုအသေးစိတ်အတွက်စဉ်းစားပါ။ ဤအလုပ်ရပ်များထွက်တင်ဆောင်လာသောများအတွက် Skype ကိုပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းဖို့ဝင်ပေါက်နှင့်အတူပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်, သင်သည် "အုပ်ချုပ်ရေးမှူး" အခွင့်ထူးရှိရမည်။
Skype ကိုအကောင့်အားဖြင့် password recovery
အခြိနျမှနျမှမဆိုအကောင့် access ကို restore ပြန်၏တာဝန်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်အနည်းဆုံးနီးပါးတိုင်းအသုံးပြုသူ။ အများစုကတော့ရိုးရှင်းစွာမေ့လျော့ဒေတာထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့ဝေဖန်ထားခြင်းကျဆင်းသွားသို့မဟုတ်ခိုးယူနိုင်ပါတယ်။ အဆုံး၌, အရေးအကြီးဆုံးကတော့ချက်ချင်းကြောင့်ဖယ်ရှား, ပြဿနာအဖြစ်အရေးကြီးသောအကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါဘူး။
အချို့ကိစ္စများတွင်, ချက်တင်သမိုင်း, သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူလုပ်ရပ်များ Skype ကိုအပေါ် log, သင် application ကိုအင်တာဖေ့စမှတဆင့်တိုက်ရိုက်သူတို့သိုလှောင်ထားသည့်အတွက်ဖိုင်ကနေ browse စရာမလိုပါ။ ဤသည်အထူးသဖြင့်မှန်သည်အမှု၌, မည်သည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်ဒေတာလျှင်, လျှောက်လွှာကနေဖယ်ရှားခဲ့ပြီး, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ operating system ကိုပြန်လည်လာသောအခါသင်တို့ကိုကယ်တင်ချင်တယ်။
လက်ရှိအခြေအနေ: Skype ကိုအတူရဲ့ login Creating
ဟုတ်ပါတယ်, Skype ကိုချိတ်ဆက်ရန်အသီးအသီးအသုံးပြုသူကိုသင်သူသညျမိမိကိုရွေးကောက်ထားတဲ့ကောင်းတဲ့ရဲ့ login ရှိသည်ချင်တယ်။ ပြီးနောက်အားလုံး, ဝင်ရောက်ရန်အသုံးပြုသူမှတဆင့်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုသွားပါဦးမည်သာ, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးရဲ့ login မှတဆင့်ပြုလုပ်အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်အတူခညျြနှောငျပါလိမ့်မယ်။ ၏ Skype အပေါ်တစ်ဦးရဲ့ login ဖန်တီးဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူကြပါစို့။ မပြုမီရဲ့ login အတွက်တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနှင့်ယခုရဲ့ login လက်တင်အက္ခရာများအတွက်မဆိုထူးခြားသောအမည်ပြောင်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်ယခင်က, သောအသုံးပြုသူ (ဥပမာ ivan07051970) ကစတင်သုံးစွဲသည့်အမည်ပြောင်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ယခု Microsoft ကများက Skype ကို၏ဝယ်ယူပြီးနောက်, ရဲ့ login အီးမေးလ်စာတိုက်ပုံး, ဒါမှမဟုတ်အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ် ဖုန်းအသုံးပြုသူသည် Microsoft အကောင့်သို့ logged ဖြစ်ပါတယ်။
Skype ကို: ကချိတ်ဆက်မှုတည်ထောင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အဘယ်သို့ပြုသနည်း
ညဦးယံ၌ကောင်းသော။ ရှည်လျားသောဘလော့ဂ်ပေါ်မှာခဲ့ပြီမျှပို့စ်အသစ်ဖြစ်, နှင့်အကြောင်းမရှိအနည်းငယ် "အားလပ်ရက်" ဖြစ်ပါတယ်နှင့် "ချထားသော, စိတ်ကူး" အိမ်ကကွန်ပျူတာပါပြီ။ ဤအစိတ်ခံစားမှု၏တဦးတည်းတွင်ငါဒါဟာလူကြိုက်အများဆုံးအစီအစဉ်ကိုအင်တာနက်မှတဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်မလျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖွင့် ... ဤဆောင်းပါး၌သင်ပြောပြချင်ပါတယ် - က Skype ကိုပါပဲ။ အလေ့အကျင့်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းပင်ထိုကဲ့သို့သောလူကြိုက်များ program နဲ့, bug တွေနှင့်ဆက်ကြောင်းအမျိုးမျိုးထားပါ။
ဒါဟာအသံတော် Skype ကိုအစီအစဉ်တွင်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ထွက်လှည့်။ အကယ်စင်စစ်သင်တို့အများအပြားပင်အကြောင်းကိုမသိခဲ့ပါ။ ဒီ function ကို default အနေဖြင့် Skype ကိုအတွက်မရရှိနိုင်သောကွောငျ့, သီးခြားစီဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖြစ်ကြောင်းအထူးအစီအစဉ်များအားဖွငျ့ပွုမိသည်။ ရဲ့သူတို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုကြည့်ပါစို့နှင့်မည်သို့သောဤဖြည့်စွက်သင့်ကွန်ပျူတာကိုအဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ကြသည်။
Skype ကိုပြဿနာ: ကင်မရာအလုပ်လုပ်မဟုတ်ပါ
အဆိုပါအစီအစဉ်၏မီးမောင်းထိုးပြ Skype ကိုဗီဒီယိုကတောင်းဆိုစွမ်းရည်များကိုပေးစွမ်းနဲ့ Web ညီလာခံကျင်းပဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ဤလျှောက်လွှာကို IP-တယ်လီဖုန်းနှင့် instant messaging အများစုအစီအစဉ်များအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်ကိုအတိအကျအရာဖြစ်တယ်။ သို့သော် user ကိုသင့်ရဲ့ PC သို့မဟုတ် Laptop ကိုပေါ်က်ဘ်ကင်မရာကို install ဘယ်သို့လျှင်မမြင်နိုင်ပါသနည်း